ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုက ဆင်းသက်လာတဲ့ ကံအကောင်းဆုံး idol ဆယ်ဦး | News Bar Myanmar
ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုက ဆင်းသက်လာတဲ့ ကံအကောင်းဆုံး idol ဆယ်ဦး
ကေပေါ့ပ်အဆိုတော်တွေရဲ့ တစ်လစာဝင်ငွေနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကြောင်းကြားလိုက်ရရင် အားလုံးတအံ့တဩဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ ဒီ idol တွေကတော့ ကိုယ့်ဝင်ငွေနဲ့လဲ ချမ်းသာသလို မွေးလာကတည်းကလဲ ကျိကျိတက်ချမ်းသာသူတွေပါတဲ့။
အဖေဖြစ်သူက တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုက ပါမောက္ခဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့လူနေမှုဘဝကိုမျက်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ လူတွေအကုန် ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်ကုန်တဲ့အထိ ချမ်းသာတဲ့မိသားစုပါ။ အဖွဲ့ဝင်တွေကို စျေးကြီးတဲ့အစားအစာတွေ ဝယ်ကျွေးတတ်ပြီး တကယ့်ကိုလူနည်းစုသာကိုင်နိုင်တဲ့ black card နဲ့ငွေရှင်းပါတယ်။
2. Super Junior’s Choi Siwon
သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူက ထိပ်တန်းဆေးဝါးလုပ်ငန်းရဲ့ CEO ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့မိသားစုဟာ ကိုရီးယားရဲ့အကြီးဆုံးကုန်တိုက်ဖြစ်တဲ့ Hyundai Department Store မှာလဲ ရှယ်ယာတွေအများကြီး ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ သူ့ဝင်ငွေနဲ့လဲ ဇိမ်ခံအိမ်တွေဝယ်ထားနိုင်ပါသေးတယ်။
Idol အပြင် မင်းသားလို့လူသိများတဲ့ သူ့ရဲ့ဖခင်ကတော့ BMW ကိုရီးယားရဲ့ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်မှာ ငယ်ငယ်တည်းကစုထားတဲ့မုန့်ဖိုး နဲ့တင် $17500 ရှိပါတယ်တဲ့။ ဖခင်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအပြင် သူ့ရဲ့အနုပညာကြေးကလဲ ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ။
သူမရဲ့မိခင်က ထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံကြီးတစ်ခုရဲ့ ရှယ်ယာအများဆုံးထည့်ဝင်ထားပါတယ်တဲ့။ မိဘတွေက အလှအပနဲ့အရေပြားဆိုင်ရာ၊ ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီဆေးရုံတွေမှာ အများအပြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားကြတဲ့ သူဌေးကြီးတွေဖြစ်ပြီး ကော်ဖီဆိုင်ကြီးနှစ်ဆိုင်လဲ ဖွင့်ထားပါတယ်တဲ့။
5. 2PM’s Nickhun
ထိုင်းနိုင်ငံကမင်းသားလေးလို့တောင် ပရိတ်သတ်တွေချစ်စနိုးခေါ်ကြပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူက ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဆေးကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်ပြီး ဖခင်ကတော့ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးပါ။ ကျောင်းစရိတ် $40000 ကျော်ပေးရတဲ့ ကျောင်းမှာတက်ခဲ့ပြီး New Zealand မှာ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
6. Girls’ Generation’s Soo Young
ဆိုးလ်ရဲ့မြေစျေးအကြီးဆုံးနေရာတွေမှာ မိသားစုပိုင် ပန်းခြံပါတဲ့ ဇိမ်ခံအိမ်ကြီးနှစ်လုံးတောင်ရှိပါတယ်။ အဖိုးဖြစ်သူဟာ Seoul Arts Center ကိုဆောက်လုပ်တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ တည်ထောင်သူဖြစ်ပြီး ဖခင်ကတော့ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌပါ။
7. NCT’s Chenle
သူတို့မိသားစုက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးမိသားစု ၂၀ စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက သူ့အတွက် ပိုက်ဆံအကုန်အကျအလွန်များတဲ့ classic ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး အဖိုးဖြစ်သူဟာ တရုတ်ရဲ့ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသား တရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပြီး သူ့ဖခင်ဟာအငြိမ်းစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး တစ်ဦးပါ။ အစ်မကြီးဖြစ်သူကလဲ အဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး Mark ငယ်စဉ်က ရေခဲပြင်လျှောစီးဖို့အတွက်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ Switzerland ကိုခရီးသွားတဲ့အထိ ချမ်းသာပါတယ်။
မိခင်ရောဖခင်ရော တရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားပြု အားကစားချန်ပီယံတွေဖြစ်တာကြောင့် ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြွယ်ဝစွာနေခဲ့ရပြီး ကျောင်းကိုလဲ International School မှာတက်ခဲ့တာပါ။ တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ အိမ်ကြီးတွေအမြောက်အများ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
ကိုရီးယားသွားဆရာဝန်အဖွဲ့အစည်း ဥက္ကဌရဲ့ သမီးဖြစ်ပြီး သူ့ဖခင်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ သွားဆေးခန်းပေါင်း ၄၀ ေကျာ်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်တဲ့။ ပွဲဦးထွက်ကာစမှာ သူမရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပေမယ့် အခုတော့သူမရဲ့အရည်အချင်းကို ပရိတ်သတ်တွေသိသွားကြပါပြီ။
Next Kris, Luhan နဲ့ Tao တို့ပြန်ပြောပြတဲ့ trainee ဘဝတုန်းက အမှတ်တရများ »
Previous « မော်ဒယ်/သရုပ်ဆောင် Park Ji Hoon ကွယ်လွန်